ေ မာ င် မိုးသူ မြ န် မာ ပြ န် သ ည် – ရှ က် ပြီးေ သ တဲ့ သင်္ဘော( ဇာတ် သိ မ်းပို င်း) | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၅
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ (ဖေဖော်ဝါရီ) ၂၀၁၅ မှ စတင်ဖော်ပြနေသည့် မိုးမခဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုကဏ္ဍတွင် အခန်းဆက်ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာ ပရိတ်သတ်များအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
လင်းအားကြီးအချိန်လောက်မှာပဲ ကျုပ်တို့ဆီဖြည့်ဖို့ ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်တယ်။
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အခြေအနေတော့ မတရားပင်ပန်းနေကြပြီလေ။ နှစ်ယောက်စလုံးက နှစ်ရက်ခွဲလုံးလုံး တစ်ခါမှ မျက်စိမှိတ်မနားခဲ့ရဘူး။ ကျုပ်လည်း သင်္ဘောအိပ်ခန်းထဲမှာ ခေါင်းချတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတော့တာပဲ။ ဟော်စကင်ပြန် ဝင်လာပြီးနှိုးမှပဲ နိုးတော့တယ်။ ဒီငနဲကြည့်ရတာ ပျော်နေပုံပဲဗျ။ ပေါင်မုန့်တွေရော၊ ချိစ်တွေရော အသီးတွေရောအပြင် ကွန်တိန်နန်တယ်ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာတစ်စောင်ပါ ပါသေး။ ကျုပ်ကလည်း စားပွဲပေါ်ချလာတဲ့သတင်းစာကိုကြည့်ပြီး မျက်စိတွေပွတ်သပ်ရင်း …. “သတင်းစာထဲမှာ ဘာတွေပါလို့တုန်း”
“ခင်ဗျားကတော့ နာမည်ကျော်နာမည်ကြီးဖြစ်နေပြီဗျို့။ ခင်ဗျားနာမည်သာ မသိကြသေးတာ”
ကျုပ်လည်းချက်ချင်းထပြီး သတင်းစာကို ကောက်ကြည့်လိုက်တော့တယ်။ မျက်နှာဖုံသတင်းကတော့ စာတိုက်နဲ့ကြေးနန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကားကို မျက်နှာဖုံးစွပ်နဲ့လူတွေက ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီး ကားထဲမှာပါတဲ့ ရွှေချောင်းသေတ္တာတွေကို ယူပြီး အသင့်စောင့်နေတဲ့ ကားတစ်စင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားကြသတဲ့။ တိုက်ပွဲသတင်း အသေး စိတ်မဖေါ်ပြပေမယ့် လူနှစ်ယောက်ကို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်သွားသတဲ့။ တစ်ယောက်က ဘဏ်တိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သမား၊ တစ်ယောက်က စာတိုက်နဲ့ကြေးနန်းအရာရှိ၊ သူတို့က ခုခံကြလို့တဲ့။ အဖြစ်အပျက်က လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကသတင်း၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ကားက တစ်နာရီမိုင် ရှစ်ဆယ်နှုန်းလောက်နဲ့ ထွက်ပြေးသွားတာတဲ့။ လမ်းမှာ ကလေးတစ် ယောက်တောင် တိုက်မိသွားပြီး ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း ဖော်ပြထားတယ်။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကားဟာ လန်ဒန်တောင်ပိုင်း ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဖော်ပြချက်အရ အဲဒီရွှေတွေဟာ ဥရောပတိုက်ဘက်ရောက်လောက်ပြီဟု ယူဆထားတယ်။ လုယက်တိုက်ခိုက်သူများ (သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ) လုယက်တိုက်ခိုက်သူများဟာ အင်္ဂလန်ရဲ့သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံးသော ဘဏ်တိုက်လုရက်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ လေဆိပ်တွေ၊ ဆိပ်ကမ်းတွေအားလုံးလည်း ပိတ်ထားတယ်။ ရွှေ ချောင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးက ပေါင် ၄၀၀၀၀၀ (လေးသိန်း) ရှိပြီး သေတ္တာရှစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားတာတဲ့ သေတ္တာပေါ်မှာ တော်ဝင်အမှတ်တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသတဲ့။
ဒီနောက်တော့ ကျုပ်တို့လည်း ငြိမ်ငြိမ်ကုတ်ကုတ် အတော်ကြာကြီး နေလိုက်ကြတယ်။ လှုပ်ရှားလို့လည်း မရဲဘူးလေ။ ကျုပ် တို့တတွေလည်း အနားယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့အတွက်လည်း အခကြေးငွေတော့ ရပါတယ်။ ဟော်စကင်ရဲ့အဆိုအရ ပေါင် ၄၀၀၀ အရဆိုရင်လည်း ဓါးမြတိုက်သွားတဲ့ ရွှေတန်ဖိုးရဲ့ တစ်ရာခိုင်းပေါ့။ ဒါလည်း ကျုပ်တို့အတွက်တော့ မနည်းပါဘူး။ ကျုပ်တို့ရထားတာ စုဆောင်းထားတာနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် အတော်များနေပြီ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်က ဟော်စကင်ကို ဒီလုပ်ငန်း ကရပ်ပြီး တော်ပြီလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကျုပ်က …
“ဒီလုပ်ငန်းကြီးက ရေရှည်မယ့်အလုပ် မဟုတ်ဖူးဗျ။ မတရားကံကောင်းနေလို့သာ အခုချိန်ထိလွတ်မြောက်နေတာ။ ကျုပ်တို့ လည်း ထိုက်တန်သလောက်စုမိဆောင်းမိနေပြီပဲ။ ထွက်ကြစို့ တော်ကြစို့ ရပ်ကြစို့”
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်သား ပစ်ကပ်ဒလီ စားသောက်ဆိုင်ကြီးမှာ စားသောက်နေတာ။ ဟော့စကင်ကဆက်ပြီး …
“ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းက အရမ်းအောင်မြင်နေပြီပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ထွက်ရ ရပ်ရမှာလဲ”
“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဆုံးတနေ့ကြရင် ကျုပ်တို့တတွေ မိသွားကြမှာကြောင့်မို့ပဲ”
“ဘာဖြစ်လို့မိရမှာလဲ ရှေ့လျှောက် တစ်လတစ်ခါပဲ အလုပ်လုပ်ကြမယ်။ ကျုပ်တို့ အခုရှိနေတဲ့ အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ တစ် လ တစ်ခေါက် သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်မရှိလောက်ပါဘူး”
“သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း နောက်ဆုံးကြရင် ကျုပ်တို့လုပ်ရပ်တွေကို သိသွားမှာပဲဗျ။ ကျုပ်တုိ့ ရေလက်ကြားကို အခေါက်ခေါက်ဖြတ်နေကြတာ သူတို့ သတိမထားရှိနေကြတယ်။ သူတို့သတိမထားမိပဲ မရှိနိုင်ဘူးဗျ”
ဟော်စကင်သည် ခွက်ထဲမှအရက်ကို အကုန်မော့သောက်လိုက်ပြီး ဝိတ်တာကိုခေါ်ပြီး နောက်တစ်ခွက်မှာလိုက်သည်။
“သက်ဆိုင်ရာတွေဆိုတာ ကျုပ်တို့လောက် မကျွမ်းပါဘူး မသိပါဘူး။ ကျုပ်တို့လို ပင်လယ်ခေါ်သံသိနေတဲ့သူတွေ မဟုတ် ကြပါဘူးဗျ”
ဟော့စကင်ပြောလိုက်တဲ့ ပင်လယ်ခေါ်သံဆိုတဲ့စာလုံးကို ကျုပ်သဘောမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဗျ။ မှန်ပါတယ် ကျုပ်ပင်လယ်ခေါ် သံကြောင့် တိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြီ။ အခုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေက အပေါစားဆန်လွန်းအားကြီးတယ်။ အောက်တန်းကျတယ်။ ကျုပ်က ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ …
“ဘာပဲပြောပြော ကျုပ်က ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ အမြဲမနေနိုင်ဘူး။ မောင်ရင်ကတော့ မောင့်ရင့်သဘောအတိုင်းပဲ။ ကျုပ်က မကြာ ခင်ထွက်တော့မယ်”
ဟော့စကင်က မကျေမနပ်နဲ့ …
“အဲဒီစိတ်ကူးကတော့ အတော် ဉာဏ်အမြှော်အမြင်မရှိတဲ့စိတ်ကူးပဲဗျ”
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်သား အရက်ခွက်ကိုယ်စီနှင့် တယောက်မျက်နှာ တယောက် ကိုယ်စီကြည့်နေပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ တွေး မိတာက ရာဇဝတ်သား ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းသားတွေဟာ အတူတွဲလုပ်နေရာကနေပြီး ခွဲထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြတဲ့သဘောကို တွေးမိ ပါတယ်။ အခုနေမှာ ကျုပ်က လုပ်ငန်းထဲကပဲထွက်ထွက်၊ မကြာခင်မှာပဲထွက်ထွက်၊ ဟော်စကင်ဆိုတဲ့ငနဲက ရဲကို လက်တို့ ပြီး ကျုပ်ကိုချောက်ချမှာ။ သူကတော့ မပါသယောင်လုပ်နေမှာ။ ကျုပ်အခြေအနေကလည်း သူချောက်ချရင် ခံရမယ့် အနေ အထား။ ဟော့စကင်ကလည်း ချောက်ချမယ့်အနေအထား။ ကျုပ်က လေသံတိုးတိုးနဲ့ ….“အေးလေ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့”
စိတ်သက်သာရသွားခြင်းဟာ တခြားတနေရာမှလာပုံရပါတယ်။ ကျုပ်ဆီကမဟုတ်သလို ဟော်စကင်ဆီကလည်း ဟုတ်ပုံ မရဘူး။ ဟော်စကင်ကလည်း ဘယ်လိုမှ အလွယ်တကူလွှတ်ပေးမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ ဒီအခြေအနေဆိုးက ကယ်တင်ဖို့ အထူး ကြိုးစားရမှာ၊ ကံကြမ္မာနဲ့ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ဖြစ် မတော်တဆတခုခုဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါမှဘဲ လွတ်လမ်းရှိတော့မှာပေါ့။
“ရိန်းလူသတ်မှုများ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းတွေကတော့ မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအဖြစ် အင်္ဂ လန် သတင်းစာတွေတင်မက ဥရောပသတင်းစာတွေအထိ ပျံ့နှံ့နေသည်။ လူသတ်မှုထဲမှာ သွေးအေးရက်စက်မှုပါတယ်။ လိင်ဖောက်ပြန်တာပါတယ်။ အခြားလျှို့ဝှက်ဆန်းပြားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ လူသတ်မှု ကျူးလွန် တဲ့ရိန်းဟာ နှစ်အတန်ကြာ စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံ (အရူးထောင်) ဘယ်လို့ ဘယ်လို စီမံဆောင်ရွက်လိုက်တယ် မပြော တတ်ဖူး။ သူဟာ စိတ်ရောဂါရှင်တဦးမဟုတ်ဖူးဆိုပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၁၀ ရက်အတွင်းမှာလည်း ၈ နှစ်ထက်မကျော်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ရိန်းက လည်ပင်းညှစ်သတ်လိုက်သတဲ့။ ပြီးတော့ လေထဲမှာပျောက်သလို ပျောက်သွားပါတယ်။ ရိန်းရဲ့အတိတ်ကအမှုတွေကလည်း အထပ်ထပ်ပေါ်လာတယ်။ ဘယ်လူသတ် မှုအတွက် အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးပေါ့။ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖော်ပြထားပါတယ်၊ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ လူရည်သန့်သန့် ခပ်ဝဝလူတယောက်ပေါ့။ ဓာတ်ပုံထဲက သူ့ပုံပန်းက ပြဇာတ်တွေထဲက ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာ ပုံစံမျိုးဗျ။ အပြောအဆို အမတန်ယဉ်ကျေးပြီး ရည်ရည်မွန်မွန် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကြင်ကြင်နာနာ နေတတ် တဲ့သူဟု သူနဲ့ဆုံဖူးကြပြောဖူးကြသူများက ပြောကြတယ်။
သူ့အိတ်ထဲမှာ သကြားလုံးတွေထည့်ပြီး ကလေးတွေကို ပေးတတ်သတဲ့။ အဲဒီလိုလူကလည်း ၈ နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေး လေးယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သွားလေတော့ သူ့ကို စိတ္တဇလူသတ်သမားအဖြစ်နဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေကဖော်ပြ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကလည်း အုတ်အော်သောင်းနင်း ရဲအဖွဲ့တွေကိုလည်း မကျေမနပ်ဆန္ဒပြကြ ဖြစ်ကြတာပေါ့၊ စိတ္တဇ လူသတ်သမားကြီးရိန်းဟာ ပျောက်ဆုံးနေတာ တလကျော်လာပြီမို့ အခုတော့ တဖြည်းဖြည်း သတင်းတွေက တိတ်ဆိတ် သွားပါတယ်။
အချိန်က ညနေမှောင်ရီပျိုးစအချိန်။ အဲဒီလို မှောင်ရီဝိုးတဝါးအချိန်မှာကို ကျုပ်သင်္ဘောပေါ် စိတ္တဇလူသတ်သမားရိန်း တက် လာ တာနဲ့ ကျုပ်မှတ်မိတယ်။
ဟော့စကင်က ခေါ်လာတာပဲပေါ့ဗျာ။ ဟော့စကင်က အဲဒီငနဲကို သူဌေးသားကြီးတစ်ယောက်လိုလို သူတိုးသားတယောက် လိုလို ပင့်လာတာပဲ။ ဟော့စကင်လည်း အဲဒီငနဲကြီးနဲ့ သင်္ဘောဝမ်းထဲဆင်းသွားတာကို ကျုပ်က ကြည့်နေရတယ်။ တချိန် ထဲမှာ ကျုပ်ခေါင်းထဲအတွေးတွေက ဝင်လာတယ်။ မဟုတ်သေးဘူး မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါတော့ လွန်လွန်းလာပြီ။ ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း အောက်ကို မိတ်ဆက်ခံဖို့ လိုက်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောကယ်ဘင် စားပွဲပေါ်မှာထိုင်ရင်း အဲဒီငနဲနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ် ဆက်ရတာ တကယ့်ကိုနိမ့်ကျ အောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ပဲဗျ။ ငနဲရဲ့လက်တွေက ခပ်ဝဝချွေးစို့စို့ပဲဗျ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင် သူက ကျုပ်ကို ဖက်ပါတယ်။ သူဖက်ပုံက တရင်းတနှီး မိတ်ဆက်တဦး တွေ့ကြတဲ့ပုံပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်သုံးပတ်က သွေးစွန်းခဲ့တဲ့လက်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆွဲရသလို ခံစားရပြီး လည်ချောင်းတွေလည်းခြောက် အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်လာသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျုပ်က လက်ဆွဲနေသောလက်ကို အမြန်ရုတ်လိုက်ပါတယ်။
ရိန်းက စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘူးဗျ။ ဒီတော့ သူ့အသံက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ မသိရဘူးပေါ့ဗျာ။ သူဟာ ဒေါင့်စွန်းကခုံမှာ ထိုင်နေလျှက် သူ့ပုံပန်းကြည့်ရတာ သေဒဏ်အကျခံရတဲ့ပုံမျိုးပဲဗျ။ ကျုပ်တို့နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါ ပူလောင်တဲ့ငရဲတွင်းထဲက အ လင်းရောင် တွေ့ရသလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ သူ့အဖြစ်ကလည်း လူကတရားခံဝရမ်းပြေး ရဲတွေ၊ လူတွေအားလုံးရဲ့ လိုက်ရှာခြင်းကို ခံနေရတဲ့သူ။ ကျုပ်တို့ကတော့ ငွေနဲ့အဝယ်ခံရပြီး သူ့ကိုအကူညီပေးနေတဲ့သူ။ သူ့အတွက်တော့ နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတမျှင် ဖြစ်နိုင်ပေတာပေါ့။
ကျုပ်က ထိပ်ပြောင်ပြောင် ဘဲဥပုံမျက်နှာဝဝကိုတချက်ကြည့်ပြီး အပေါ်တက်ခဲ့တယ်။ ကုန်းပတ်ပဲ့နင်းခန်းထဲကို ကျုပ် ရောက်တော့ ဟော်စကင်ကလည်း လိုက်လာတယ်။ ကျုပ်က ရွံရှာစက်ဆုတ်တဲ့အသံနဲ့ …
“ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျာ … မင်းရူးများနေပြီလား”
“ဒါအလုပ်ပဲဗျ … အလုပ်လက် ခံတဲ့သဘောပေါ့”
ဟော့စကင့်လေသံက ဘာမှမထူးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေပေမယ့် သူ့ရင်ထဲကခံစားမှုကတော့ မကောင်းဆိုးဝါး ဒုစရိုက်အလုပ် မှာ အဆုံးစွန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သူလည်းခံစားမိမှာဘဲ။ အဲဒီခံစားမှုကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူက …
“သူလည်း ကျုပ်တို့သယ်ပို့ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတခုပေါ့ဗျာ။ တခြားတခြား ကုန်ပစ္စည်းတွေလိုပဲပေါ့”
ကျုပ်က မကျေမနပ်နဲ့ …
“သူက တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေလိုမှ မဟုတ်တာ။ သူက လူသတ်ကောင်၊ မဒိန်းသမား အဲဒီပြစ်မှုနှစ်ခုစလုံးကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကလည်း ခုနစ်နှစ် ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကို သတ်လာတဲ့အကောင်”
ကျုပ်က စတွေးတစ်ချက်မြိုလိုက်ပြီး …
“ဒါကတော့ ကျုပ်တို့လုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးအလုပ်ပဲဗျာ”
ဟော့စကင်က ကျုပ်နားကိုကပ်လာပြီး လေသံတိုးတိုးနဲ့
“ဒီလိုရှိတယ်လေ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး သိပါတယ်။ ဒီငနဲဟာ ရာဇဝတ်ဘေးက ပြေးမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ပြင်သစ်မြေကို အခြေချတာနဲ့ သူ့ကို ဗြိတိန်ရဲဖမ်းမှာပဲ။ ကျုပ်တို့ကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ မြတ်မြတ်လေးရတာပေါ့ဗျာ”
ဟော်စကင်က လေသံတိုးတိုးနဲ့ ….
“ရိန်းက အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူဗျ။ ပေါင် နှစ်သောင်းငါးထောင်လောက် ဖွက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့လူ။ အခု သယ်ယူပို့ဆောင်ခ ငါး ထောင်ပေးပေမယ့် အဆင်ပြေရင် အားလုံးကျုပ်တို့ ရသွားနိုင်တယ်”
ဟော့စကင်သည် ကျုပ်ကို အနီးကပ်ပြီး ကြည့်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက အမှောင်ထဲမှာတောင် အရောင်တောက်နေတယ်။ သူက ကျုပ်ကို ငွေနဲ့ဘန်းပြပြီး မြူဆွယ်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ဘက်ကတော့ စိတ်ဒုံးဒုံးချလိုက်ပါပြီ။ သူဘာတွေပဲပြောပြော ဘယ်လိုပဲ ဖြားယောင်းဖြားယောင်း ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ရွံရှာစက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါပေ မယ့် ကျုပ်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာတခုကတော့ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီခရီးစဉ်ကို အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ရမယ်၊ ပိုက်ဆံ ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ ငွေရေကြေးရေးကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့အလုပ်က ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ပဲ၊ ရိန်းက လည်း ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲ။ ကျုပ်အဖြစ်က ဒီဒုစရိုက်ကုန်သွယ်မှုအလုပ်ထဲမှာ ပိနေပြီ ညှပ်နေပြီ ရောက်နေပြီ။ ကျုပ်တို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ စီးကရက်တွေသယ်ပေးခဲ့တယ်၊ အရက်တွေသယ်ပေးခဲ့တယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သယ်ပေးခဲ့တယ်၊ လူကုန်ကူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို သယ်ပေးခဲ့တယ်၊ လူသေအကောင်တွေလည်း သယ်ပေးခဲ့တယ်၊ ခိုးယူ ဓါးမြတိုက်ခဲ့တဲ့ ရွှေချောင်းတွေကိုလည်း သယ်ပေးခဲ့တယ်၊ ကျုပ်တို့ မကောင်းမှုဒုစရိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။
“ဒါကတော့ ကျုပ်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးအလုပ်ပဲဗျာ”
အဲဒီလို ပါးစပ်ကငြီးတွားလိုက်ပေမယ့် အလုပ်က ကျုပ်ခေါင်းထဲမှာ ပိနေတယ်။
စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့်ဖြစ်တာနဲ့ လှေခါးထိပ်သွားပြီ အောက်ကယ်ဘင် အခန်းထဲသွားပြီး အောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ။ ရိန်းဟာ ကျုပ်တို့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်။ သူလည်း ကျုပ်ခြေသံကို ကြားလို့မော့ကြည့်တယ်။ ကျုပ်တို့နှစ် ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံမိသွားကြတယ်။ ရိန်းက ပုခုံးတွန့်ပြတယ်။ သူ့ဟန်ပန်က ဟုတ်တယ် ကျုပ်ကရိန်းပဲ၊ ခင်များ ကျုပ်ကို သဘောမကျဘူး မကျေနပ်ဘူးဆိုတာ ကျုပ်သိတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း ကျုပ်ကို သဘောမကျကျဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့က ကျုပ်ပိုက်ဆံနှစ်သောင်းငါးထောင်ယူပြီး ဒီကလွတ်အောင် ကယ်ပေးကြရမှာလေ။ ကျုပ်တို့ ဘယ်တော့စထွက်မလဲ သူ့မျက် လုံးတွေက အဲဒီလိုပြောနေပုံဗျ။ ကျုပ်ကနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပြီး သင်္ဘောပဲ့နင်းခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်၊ သင်္ဘောအင်ဂျင်စက် ကိုမနှိုးခင် ကျုပ်က …..
“သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ MGB1087 ရယ်။ မင်းကလည်း ဒီလိုလုပ်နေတာကို သဘောကျမယ်မထင်ပါဘူး”
လင်မင်တန်မြစ်ထဲက ကျုပ်တို့သင်္ဘော ထွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း အရှေ့တောင်လေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခတ်ပါ တယ်။ ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် ကျုပ်တို့ခရီးက မလွယ်ပေဘူး။
ကျုပ်တို့သွားရမယ့်ခရီးက အတော်ဝေးတယ်။ ဆိုနစ်ကျွန်းကိုဖြတ်ရမယ်။ လွိုက်ကျွန်းစုရဲ့အနောက်ဘက်ကပတ်ပြီး ပြင်သစ် ကမ်းခြေ ချန်းပေါက်ကျွန်းဆွယ်ကိုသွားရမယ်။ အဲဒီကတခါ တောင်ဘက်ကိုကူးပြီး စိန့်မာလိုကို သွားရမှာပေါ့၊ ဟော်စကင် ရဲ့ပြောစကားအရ ရာဇဝတ်ကောင်ရိန်းက စိန့်မာလိုမှာ ဆင်းမှာတဲ့။ စိန့်မာလိုက ရော့ခ်ကမ်းခြေ၊ အဲဒီမှာကျတော့ ရိန်းအ တွက် ရဲလက်ကလွတ်အောင် ရှောင်နိုင်ဖို့လမ်းများတယ်၊။ စိန့်မာလိုအထိ ရောက်အောင်သွားရမယ့်ခရီးက မိုင်ရာကျော်ခရီး။ အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ရေလက်ကြားရဲ့တကယ်အကာကွယ်မဲ့တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ရမယ်။ လှိုင်းတွေအင်မတန်ကြမ်းတဲ့ ပင်လယ် ပြင်၊ ဒီကြားထဲမှာ လေက ပြင်းထန်စွာတိုက်စပြုနေတယ်။ လှိုင်းလုံးကလည်း တဖြည်းဖြည်းကြီးလာ။ ဗြိတိန်ကမ်းခြေ တဝိုက်မှာလည်း ဘယ်နေရာမှ ရာသီဥတုကောင်းတာ မမြင်ဘူး။
ကျုပ်တို့က ည၁၀နာလောက်က ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ မနက်မိုးလင်းခါနီးကျတော့ ဆိုးတန့်ကို ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဝိုက်ကျွန်း ဆွယ်ရဲ့အနောက်ဖျားအစွန်ကိုပတ်ဖြတ်ဖုိ့ ကြိုးစားရတာ အဲဒီဘက်လည်းရောက်ဖို့ လေကအပြင်းတိုက်တော့တာပဲဗျို့၊ ဒေါသ ကြီး လှိုင်းလုံးပြင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ကို MGB1087 ရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲ။ လေကထန် လှိုင်းကကြီးနဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံးရိုက်ခတ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ ဦးတည်ရာဘက်က ပြောင်းပြောင်းသွားပါရော။ လေကလည်း အပြင်းထန်တိုက် နေတယ်။ ကျုပ်တို့သင်္ဘောကလည်း လေပြင်းမုန်တိုင်း လှိုင်းလုံးလေတွေကြားထဲမှာ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့် ဖြတ်နေရပါ တယ်။
ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ လေဒဏ် လှိုင်းဒဏ်ကို သုံးနာရီကျော် အပြင်းအထန်ခံစားရပြီးနောက် နောက်ထပ်ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆို တာကို ကျုပ်သံသယဝင်လာမိတယ်။ ရိန်းကတော့ အောက်ထပ်သင်္ဘောကယ်ဘင်ထဲမှာ လှိုင်းမူးနေတယ်လို့ ဟော်စကင် က ပြောတာပဲ။ ဟော်စကင်ကတော့ ကျုပ်ဘေးမှာနေပြီး အင်ဂျင်ကိုထိန်း ပဲ့ကိုင်ကွင်းကို ဝင်ထိန်းလုပ်နေရတာပေါ့။
တကယ်တော့ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အရမ်းအရမ်းကို ပင်ပန်းတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကိုယ်လုံးမှာလည်း ပင်လယ် ရေတွေက ရွှဲရွှဲစိုလို့။ ကျုပ်တို့အချိန်က အင်္ဂလိပ်ကမ်းခြေက ခွာနေသေးတာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ် ဒီထပ်ဆိုးတဲ့ လေ ဒဏ် လှိုင်းဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ရအုံးမယ့်ပုံပဲ။ ကျုပ်က ဟော်စကင်ကို လှမ်းအော်ပြောမိတယ်။
“ကျုပ်တို့တော့ မလွယ်တော့ဘူးထင်တယ်။ ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ ဒီလှိုင်းဒဏ် လေဒဏ်ကြားမှာ ဦးတည်ရာရောက်ဖို့ ရေမိုင် နှစ်မိုင် သုံးမိုင်ရောက်ဖို့ တအားခုတ်မောင်းနေရတယ်။ ရှေ့လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကလည်း ကြမ်းတထက်ကြမ်း မယ်ထင်တယ်။ အင်ဂျင်စက်က တခုခုဖောက်သွားလို့ကတော့ ကျုပ်တို့မြှုပ်ပြီးသားပဲဗျို့”
ဟော့စကင်က လေဒဏ်လှိုင်းဒဏ်တွေကြားထဲက ကျုပ်ကိုပြုံးပြတယ်။
အဲဒီလိုအော်ပြော ပြုံးပြလိုက်တဲ့ဟော့စကင်ကို အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ ကျုပ်သဘောကျသွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တိုက်ပွဲတွေကြား အခက်ခဲတွေကြား အတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဟော်စကင်ရဲ့ပုံစံမျိုး ပြန်ပေါက်လာသလိုမျိုးဖြစ်ပါ တယ်။
အခြေအနေကတော့ ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ MGB1087 ဟာ အပြင်းအထန်ဆုံး လှိုင်းလေ ဒဏ်ကို အပြင်းထန်ခံနေရှာတယ်၊ လှိုင်းလုံးကြီး တစ်လုံးနှင့်ကြုံတိုင်း အပြင်းအထန်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ ရေတွေကလည်း ကျုပ်တို့ ပဲ့စင်က လူတွေကိုိ စိုစေရုံမကဘူး၊ အောက်က ကယ်ဘင်တို့စက်ခန်းအထိ ရောက်နေလောက်ပြီ။
လေကလည်း ထန်သထက် ထန်လာတယ်။ ကျုပ်တို့အခြေအနေ နောက်ပြန်ကမ်းပြန်ကပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ရှေ့ဆက်တိုးရင် လည်း ဒီလှိုင်းလုံးကြီးတလုံးရဲ့အောက်မှာ ကျုပ်တို့ စုန်းစုန်းမြှုပ်တော့မှာ။ နေ့ခင်းလောက်အရောက် MGB1087 အင်ဂျင်က ဖောက်လာတော့တာပဲ။ ပင်လယ်ရေတွေ အင်ဂျင်ထဲကိုဝင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ အင်ဂျင်ဖောက်ပြီး စက်ရှိန်ကျသွား တာနဲ့တပြိုင်တည်း ကျုပ်တို့အခြေက လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြတ်ဖို့ အားမရှိတော့။
ဟော့စကင်နဲ့ကျုပ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်တယ်၊ ရာသီဥတုကလည်း အလွန်ဆိုး၊ သင်္ဘောစက်အရှိန်က လည်းကျလာ၊ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးတလုံးပုတ်လိုက်စဉ် ပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ရေငန်တွေ ထွေးထုတ်ရင်း ကျုပ်က လှမ်းအော်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
ဟော့စကင်က ကျုပ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ သူ့မျက်နှာဟာတင်းမာနေပေမယ့် သူလည်း ကျုပ်လိုပဲ၊ ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာ နေပြီဆိုတာ ကျုပ်ရိပ်မိတယ်။ အခြေအနေက မကြောက်လို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျုပ်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာက အငူထိပ် မိုင်နှစ်ဆယ်လောက်မှာရောက်နေတာ။ အကာအကွယ်ရှိတဲ့ ကမ်းတခုကိုကပ်ဖို့ဆိုတာ မိုင်နှစ်ဆယ်လောက် ကွာ လှမ်းနေသေးတယ်။ အဲဒီခရီးကိုရောက်ဖို့ဆိုတာက MGB1087 ကို ခေါင်းပြန်လှည့်ရမယ်။ မုန်တိုင်းကထန် ရာသီဥတု က လည်းဆိုး၊ အင်ဂျင်ကလည်း အားနည်းပြီး ဒုက္ခပေးနေတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ကျုပ်တို့သင်္ဘောဟာ ဒုတိယအကြိမ် ဆုံမယ့် လှိုင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြန်မလှည့်လို့ကလည်း မဖြစ်ဘူးလေ။ အခုမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်မ လှည့်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့အခြေအနေက နောက်ကျသွားတော့မှာ။ ဆက်သွားပြန်ရင်လည်း စုန်းစုန်းမြှုပ်ရမယ့်လမ်းကိုပဲရှိ တော့တယ်။ ဘာပဲပြောပြော MGB1087 ဟာ ရှေ့တိုးသည်ဖြစ်စေ နောက်ဆုတ်သည်ဖြစ်စေ အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာ အမှန်ပဲ။ ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ငင်းအခြေအနေအရ ကံကြမ္မာကတော့ ဒီကောင်မကြီး MGB1087 လက်ထဲမှာရောက်နေပြီပဲ။
ကျုပ်က ပြန်လှည့်ဖို့ထပ်ကာတလဲလဲ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်ပါဝါက နောက်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝ ပြန်လှည့်ဖို့မရ ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြန်လှည့်လိုက်လို့ ခရီးတဝက်လောက်ရောက်ရင် လှိုင်းဒဏ်နဲ့ဆုံပြီး မူလလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြန်ရော၊ လှိုင်းဒဏ်အပြင် လေပြင်းမုန်တိုင်းကလည်း ပြောင်းပြန်တိုက်နေတယ်။ ကျုပ်တို့ပြန်လှည့်လို့ တ၀က်လောက် ရောက်တိုင်း ချာလပတ်လည်ပြီး မူလလမ်းကြောင်းပြန်ရောက်နေတော့တာပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ကျုပ်တို့ကတော့ နောက် တကြိမ် ကြိုးစားရပြန်တာတော့။
အဲသလိုဖြစ်နေတဲ့တချိန်ထဲမှာ သင်္ဘောဟာ ဝေဒနာခံစားနေတဲ့ရောဂါသည်တယောက်လို ကြက်သီးထစရာ တုန်ခါလို့ နေပါ တယ်။ သင်္ဘောထဲကိုဝင်လာတဲ့ရေတွေကလည်း အောက်ထပ်ကယ်ဘင်ထဲရောက်တဲ့အပြင် အင်ဂျင်စက်ဂီယာတွေထိ ရောက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ အခြေအနေက အရမ်းကိုဆိုးနေပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ MGB1087ဟာ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကောင်မကြီးဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုခွန်အားတွေသုံးပြီး တော့ နောက်ဆုံးရအောင် ကွေ့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကွေ့လိုက်နိုင်တာနဲ့ တဆက်တည်းပဲ ခရီးလမ်းကြောင်းက စတော့တာပါပဲ၊
ကျုပ်ရင်ထဲမှာခံစားနေတာကတော့ ဒီကောင်မကြီး ဆက်လက်အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ အဲဒါကို လက်ကိုင်ဘီး ကိုင်နေရတဲ့ခံစားမှုက ရနေတာ။ အင်ဂျင်စက်သံကလည်း တဖြည်းဖြည်းကျဆုံးနေပြီ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် အခြေအနေအားလုံးက MGB1087 ဟာ ကမ်းနားကိုရောက်အောင် မသွားလောက်နိုင်တော့ဘူး။ ကျုပ်တို့မောင်းနှင်အားကလည်း လျော့သထက် လျော့လာပြီ။ ဟိုးရှေ့ဝေးဝေးမှာ ကမ်းခြေကို ဝိုးတဝါးမြင်ရပါပြီ။ အဲဒီကမ်းခြေကိုရောက်ဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြစ် နေပါတော့တယ်။ မျက်စိက လှမ်းမြင်နေရတဲ့ခရီးကို လက်တွေ့က နီးနီးမလာနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
လှိုင်းလုံးတွေကလည်း တလုံးပြီးတလုံး ကျုပ်တို့အပေါ် ဖိစီးနေတယ်။ ကျုပ်တို့သင်္ဘောက လှိုင်းလုံးတလုံးအောက်ကို ရောက်သွားလိုက် နောက်တလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လာရ လှိုင်းလုံးအောက်ကို ထပ်ရောက်သွားပြန်၊ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ ပင်လယ် ပြင်ကြီးထဲမှာ ကျုပ်တို့ရဲ့သင်္ဘောက တဖြည်းဖြည်းသေးသထက်သေးလာတော့တယ်။
နောက်ဆုံး လှိုင်းလုံးကြီးတလုံး ထိလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ကျုပ်တုိ့သင်္ဘော ဒီကောင်မကြီးဟာ နောက်ထပ်မခံနိုင်တော့လို့ ဆုံး ဖြတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ ကြိုးစားအားထုတ် မှုမလုပ်တော့ပါဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အောက်ဘက်ကယ်ဘင်ခန်းဆီက ကျိုးသံပဲ့သံတွေကြားရတယ်။ ဗြုန်းဆို ကယ်ဘင်တံခါးကြီးက တခုခုက ရိုက်ခက်လိုက်သလို ပွင့်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ရိန်းထွက်လာပါတယ်။ သူ့ပုံပန်းကြည့်ရတာ အရမ်းအခြေအနေဆိုးနေပြီ။ လှိုင်း မူး လေမူး ပင်လယ်မူတဲ့ဒဏ်ကိုခံရလို့ မျက်နှာတခုလုံးကလည်း ညိုမဲစိမ်းပုတ်နေတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ သေဆုံးနေပြီး သားလူလိုဖြစ်နေတယ်။ သူက ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့မျက်စိထဲမှာ သူသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေရဲု့ပုံတွေကိုမြင်ယောင်နေတဲ့ပုံပဲ။ တလုံးပြီးတလုံး ဖုံးအုပ်လာတဲ့လှိုင်းလုံးတွေက သူသတ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလို့ မြင်နေပုံရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ MGB1087 သင်္ဘောရဲ့ အင်ဂျင်စက်ဟာ ချောင်းတချက်ဆိုးပြီး ရပ်တန့်သေဆုံးသွားပါတော့တယ်။ ကျုပ်တို့ အခြေအနေက ကူရာမဲ့ ကယ်ရမဲ့ဖြစ်ပြီး လှိုင်းလုံးတလုံးဖိလိုက်တိုင်း မြှုပ်နေရတဲ့ဘဝပေါ့။ MGB1087 ဟာ ရေပြည့်နေတဲ့ သင်္ဘောပျက်ကြီးကို လှိုင်းလုံးတွေဖိတာတို့ မုန်းတိုင်းတွေတိုက်တာတို့ ခံနေရပါတော့တယ်။ ဟော်စကင်က ထိန့်လန့် ကြောက်ရွံ့ပြီး အသက်မရှိတော့သလိုဖြစ်နေတဲ့ ရိန်းရဲ့ပုခုံးကိုကိုင်လှုပ်ပြီး ဟိုးအဝေးဝေးမှာရှိနေတဲ့ ကုန်းမြေကို လှမ်းပြပါ တယ်။ အဲဒီကုန်းမြေကလည်း အဝေး အဝေးကြီးမှာရှိနေလေတော့ လှိုင်းလုံးတွေကြားက မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက မသဲကွဲပါဘူး။
ဟော်စကင်က အဲဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတာဟာ ဘယ်လောက်ထိရောက်သလဲလို့ မပြောတတ်ဘူး။ ရိန်းကတော့ အဲဒါဟာ သေချာခိုင်မာတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ ယုံကြည်သွားပုံရပြီး ခေါင်းညိမ့်ပြတယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း နောက်ဆုံးခွန်အားအဖြစ် စု စည်းလိုက်ပုံရတယ်။ နောက်ဆုံး လှိုင်းလုံးကြီးတခု ကျုပ်တို့အပေါ်ဖိအလာမှာ ရိန်းဟာ ပင်လယ်ထဲကို ခုန်ချလိုက်ပါ တော့တယ်။
အဲဒီအလုပ်ဟာ သင့်လျော်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ရိန်းအတွက်တော့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ သူဟာ သင်္ဘောသား ရေကူးသမား လည်းမဟုတ်တဲ့အပြင် ခွန်အားကလည်း မရှိတော့ဘူးလေ။ ကျုပ်တို့လှမ်းမြင်ရတာတော့ သူ့ရဲ့ထိပ်ပြောင်ပြောင်ခေါင်းကြီး လှိုင်းလုံးတွေအောက်မှာ နစ်မြှုပ်သွားတာကို မြင်နေရတော့တာပါပဲ။ သင်္ဘောကြီးကလည်း လှိုင်းလုံးအောက်ရေထဲမှာ စုန်းစုန်းမြှုပ်ပါတော့တယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်က သေဆုံးနေပြီးသားလိုဖြစ်တဲ့ ရိန်းရယ် ဟော်စကင်ရယ် သင်္ဘောကြီးရယ် ကျုပ်ရယ် အားလုံးဟာ ဒေါသအမြက်ချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ သေဆုံးကြဖို့ပဲ ရှိတော့တာပဲ။
ဟော်စကင်ဟာ ကျုပ်ပုခုံးကို သူ့ဘက်ဆွဲလှည့် လိုက်တယ်။ ကျုပ် သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့မျက်နှာ ဟာ အရင်တုန်းကလို မာနတခွဲသားမဟုတ်တော့ပဲ အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျုပ်တို့ခြေ ထောက်အောက်ကသင်္ဘောဟာ တုန်ခါပြီး ရေအောက်ကို နစ်သထက် ဆွဲ၍သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဟော်စကင်က ထိတ်လန့်တကြားအော်ပြောတယ်။
ကျုပ်က ရယ်ချင်စိတ်တအားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ပြင်ပြင်းတချက်ရှုလိုက်ပြီး …
“ကျုပ်ကတော့ ရေကူးတတ်တယ်ဗျ ပြဿနာမရှိဘူး”
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သင်္ဘောဟာ ရေအောက်ကိုမြှုပ်သွားပြီး ကျုပ်က လှိုင်းထန် လေထန်တဲ့ကြားထဲမှာ ကမ်းဘက်ကိုမှန်းပြီး ကူးရတော့တာပေါ့။ အဲဒါ ဟော်စကင့်ကို နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းက ဒါပါပဲဗျာ။ ကျုပ်ဇာတ်လမ်းအစမှာပြောခဲ့သလို ကျုပ်နားမလည်နိုင်တာတွေက အများကြီးဗျ။ ကျုပ်တို့ ကောင်မကြီး MGB1087 ဟာ ဘာ့ကြောင့် ရေထဲမှာ နစ်မြှုပ် အသေခံလိုက် ရတာတုန်း။ ဘာတွေများဖြစ်သွားလို့ပါလိမ့်၊ ကျုပ်တို့ဒီသင်္ဘောကြီးကို ကောင်းအောင်အစွမ်းကုန် တီထွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီကောင်မကြီး က နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာ အားလျော့လိုက်သလိုပဲဗျ။ ကျုပ်တို့စေခိုင်းသမျှ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဟာ ဒီကောင်မကြီး သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက် သွားပုံပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွေးဟာ အတော်အူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ အတွေးဗျ။ ကျုပ်မှာ အဲဒီအတွေးအတွက် ကျုပ်မှာဘာ လက် ဆုပ် လက်ကိုင်ပြစရာ မရှိပါဘူး။ စစ်အတွင်းကာလက ဒီကောင်မကြီးဟာ သူ့ရဲ့ခက်ခဲဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တာပဲဗျို့။
ဒီကောင်မကြီး ဒီသင်္ဘော 1087 အပြစ်မရှိရှာပါဘူး။ အပြစ်ရှိတဲ့သူက ကျုပ်ပါ။ ကျုပ်က ဒီကောင်မကြီး ဒီသင်္ဘောကြီး အရှက် ရသည်ထက်ရအောင် ဒုစရိုက်မှုတွေကို လုပ်ခဲ့ခိုင်းခဲ့မိတာကိုး။
သင်္ဘောကြီးနစ်မြုပ်သွားရတာ ကျုပ်အပြစ်ပါ။ သင်္ဘောကြီးက ရှက်ပြီးသေသွားရရှာတာပါ။
ပြီး ပါ ပြီ
၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်။
ရှက်ပြီးသေတဲ့သဘောင်္ (အပိုင်း – ၁)
ရှက်ပြီးသေတဲ့သဘောင်္ (အပိုင်း – ၂)
ရှက်ပြီးသေတဲ့သဘောင်္ (အပိုင်း – ၃)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဘာသာပြန်ကဏ္ဍ, ရသဆောင်းပါးစုံ, မောင်မိုးသူ